Maxkamada Jubbaland ayaa waxaa maanta la hor keenay 13 Nin oo la sheegay inay ahaayeen kuwo Amni daro ka abuurayey Magaalada Kismaayo. .. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Maxkamada Jubbaland ayaa waxaa maanta la hor keenay 13 Nin oo la sheegay inay ahaayeen kuwo Amni daro ka abuurayey Magaalada Kismaayo. ..
Maxkamada Jubbaland ayaa waxaa maanta la hor keenay 13 Nin oo la sheegay inay ahaayeen kuwo Amni daro ka abuurayey Magaalada Kismaayo.
Askar ayey Ahaayeen kuwaas oo gadood ay sameeyeen dhawaan tacshiirad la is weydaarsaday ay keentay khasaaro kala duwan.
Waxa lagu soo Eedeeyey inay Amni daro sameenayeen,taas oo la dhageystay dacwadaha lagu soo oogay.
Previous Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada oo warqad jawaab ah u diray Aqalka Sare
Next Beesha warlabe oo hadhimo sharafeed u samaysay wax garad ku sugan degmada Badhan